စူပါ Antivirus ကို - ဗိုင်းရပ်စ် & အတွက် Junk Cleaner | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » စူပါ Antivirus ကို - ဗိုင်းရပ်စ် & အတွက် Junk Cleaner, Booster
စူပါ Antivirus ကို - ဗိုင်းရပ်စ် & အတွက် Junk Cleaner, Booster APK ကို
စူပါ Antivirus ကို အခမဲ့ဖြစ်ပါသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင် အတွင်းအပြင်အစွမ်းထက် antivirus ကိုအင်ဂျင်နှင့် WIFI လုံခြုံရေး app တစ်ခု။ ဒါဟာမဆိုဗိုင်းရပ်စ်များ, malware နှင့် Trojan တွေကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကာကွယ်ပေးသည်; 360 ဒီဂရီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလုံခြုံရေးပေးစွမ်းသည်။
အခမဲ့ antivirus ကိုသန့်စင်, ဒါပေမယ့်လည်းတခုမဟုတ်မှသာလျှင် အားလုံးတစ်ဦးက Toolbox ကိုခုနှစ်တွင် သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းများအတွက်။ သင်တို့သည်လည်းဖုန်း Cleaner, မြန်နှုန်း Booster, AppLock, အဖြစ်ကဒီအခမဲ့ Antivirus ကိုယူနိုင်ပါသည် virus Cleaner, ဘက်ထရီချွေတာ, ဖုန်း Cooler, RAM ကို Cleaner, သတိပေးချက် Cleaner, cache Cleaner, Junk ဖယ်ရှားရေးနှင့်ဒါပေါ်မှာ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ android ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေး, သင့် android ဖုန်းကိုကာကွယ်ပေး, သင့် android ဖုန်းကယ့်ကိုတစ်ခုအစွမ်းထက်ဟာ android ဖုန်းကိုမာစတာမြှင့်တင်ရန်။
စူပါ Antivirus ကိုစနစ်အားလုံးသင့်ရဲ့ apps များနှင့်ဖိုင်များအပေါ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် malware ဖတ်နှင့်လုပ်ကွက်များနှင့်အန္တရာယ်ရှိသော app များ install လုပ်ထားတစ်ချိန်ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် malware ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ စူပါ Antivirus ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးရန်ကူညီပေးသည်နှင့်ပိုမိုလုံခြုံစေပါ။
★ WIFI လုံခြုံရေး
စူပါ Antivirus ကိုအတု WIFI ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သင်တို့အဘို့အလိုအလြောကျ WIFI ကို encrypt မလုပ်ထားပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်မည်သည့် privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲလုံလုံခြုံခြုံမဆိုအများပြည်သူ WIFI ကိုသုံးနိုင်သည်။
cache Cleaner လုံခြုံစွာအသုံးမကျ application ကို cache ကိုဖိုင်တွေသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုမြန်ပိုပြီးအာကာသလွှတ်လိုက်ပါ။
junk Cleaner အတွက်အသုံးမကျမှတ်တမ်းဖိုင်များ, ယာယီဖိုင်တွေ, သမိုင်းဖိုင်များနှင့်အေဒီဖိုင်တွေကိုအားလုံးထွက်တွေ့, ပြီးတော့မိုဘိုင်းဖုန်းပိုသိုလှောင်မှုကိုလွှတ်ပေးရန်သူတို့အားကျန်နေတဲ့ Junk ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ app ကိုသိုလှောင်ရန်နေရာဖြန့်ချိဖို့ကို install ပြီးနောက်ဒါ့အပြင်စင်ကြယ်သော apk ဖိုင်တွေ။
★ ဖုန်းနံပါတ် Booster
မှတ်ဉာဏ်လွှတ်ပေးရန်နှင့် 60% ဖြင့်သင့် android ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နောက်ခံ apps များကိုသတ်။ ဖုန်းကိုမြန်နှုန်းမြှင့်ကိုလည်း apps များအများကြီးအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုဖို့ကိုသတ်မယ့်အင်တာနက်အာနိသင်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပြီး, ဖုန်းကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်သည် popups ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပြတင်းပေါက်သန့်စင်။ ယခုမိုဘိုင်းဖုန်းများမြှင့်တင်ရန် Go!
★ ဂိမ်း Booster
android ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအာနိသင်တိုးမြှင့်အားလုံးသင့်ဂိမ်းများကိုတွေ့နှင့်ဖြတ်လမ်းဖိုင်တွဲသို့သူတို့ကိုငါရရှိသွားတဲ့။ သငျသညျဂိမ်းများကိုဆော့ကစားမီ, ဂိမ်းအာနိသင်တိုးမြှင့်သင့်ရဲ့ဂိမ်းချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေစေဖို့ပို memory space ကိုလွှတ်ပေးရန်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
★ ဘက်ထရီ Saver
1 ကိုထိပုတ်ပါသဖြင့်အာဏာကိုကယ်ဖို့ apps များဖျန်ဘက်ထရီကိုသတ်; သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပါဝါနိမ့်သည်သောအခါ, ဘက်ထရီချွေတာ apps များသန့်ရှင်းရေးအားဖြင့်ဘက်ထရီကိုကယ်ဖို့သငျသညျကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
★ ဖုန်းနံပါတ် Cooler
ဖုန်းနံပါတ် Cooler တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူထိရောက်စွာသင်၏ android ဖုန်းကိုအပူချိန်ကိုချအေး။
★ မိုဘိုင်း Boost
မှတ်ဉာဏ် Booster အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
စူပါ Antivirus ကိုတစ်ဦး AppLock PIN နံပါတ်သို့မဟုတ်ပုံစံနှင့်သင်၏ app ကို privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အထိခိုက်မခံ app များကိုဒီတော့အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ကို WhatsApp ကို, Instagram ကို, Facebook, Messenger ကို Gmail, နှင့်တက်သော့ခတ်။
★ သတိပေးချက် Cleaner
ဤမျှလောက်များစွာသောဆူညံခြင်းနှင့်အချည်းနှီးအသိပေးချက်များကို? လိုအပ်သောလျှင်မလိုချင်တဲ့အကြောင်းကြားစာများအသံပိတ်နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကဒီစူပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်အသုံးပြုပါ။ အဆိုပါ junk အကြောင်းကြားစာသန့်စင်တစ်ဦးသို့ junk အသိပေးချက်များကိုစုဝေးစေပြီးလျှင်, လိုအပ်ပါကသူတို့ကိုရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်။
★ 1 ကိုထိပုတ်ပါထပ်တိုး
ဤသည်စူပါအစာရှောင်ခြင်း antivirus ကိုသန့်စင် 1 ကိုထိပုတ်ပါထပ်တိုး desktop shortcut တခုကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်, သင်အလွယ်တကူတဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါသဖြင့်ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
★ အင်တာနက်ကို Booster
ထွက်ရှာနှင့်အင်တာနက်သုံးပြီး apps များကိုသတ်ပစ်ရန်အင်တာနက်ကို Booster ကိုသုံးပါ။
1 ။ အဆိုပါ bug တွေကို fix;
2 ။ တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
စူပါ Antivirus ကို - ဗိုင်းရပ်စ် & အတွက် Junk Cleaner, Booster
9.88 ကို MB
စူပါ Cleaner စတူဒီယို